Wp/blk/အဓိကလိတ်မဲ့ငါ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > အဓိကလိတ်မဲ့ငါ
လွူꩻထွားလိတ်မဲ့ငါယိုကို လိတ်ဖြုံႏထီႏမဲဉ်ႏတောဝ်းဖုံႏ ကျုံႏခွဲးအယပ်ꩻခုဲင်ႏအောဝ်ႏဟောင်း? လိတ်ဖြုံႏမဲဉ်ႏ ဖောင့်လꩻနွောင်ꩻခင်ႏလမ်း နျꩻသွော့ယိုကို
တောင်ꩻခါ: Browser web ယဟန်ႏ အွဉ်ႏနယ်ဖေႏနွောင်ꩻလို့တဝ်း မန်း/ပအိုဝ်ႏယူနီကိုဒ်လိတ်ဖြုံႏအမဲဉ်ႏ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ Wikimedia Incubator နောဝ်ꩻ တထွာတောဝ်းသွူ
Having problems reading this page? Fonts are available here.
ဝီခီယိုနောဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင်
အကျောင်ꩻခရာႏ ၉၃၉ ဗာႏယို ဟော်ꩻထွားနွောင်ꩻလဲဉ်း တောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ သွူ။
ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ဝ သ ဟ ဠ အံ ဣ ဤ ဥ ဦ ဧ ဩ ဪ
ကောပ်အခရာႏ • ဆင် • ငဝ်းရီ • ကူႏညီႏ • Guestbook
မာတိကာ • အပဲင်ꩻစော့ႏ • ရောမ်ဖြုဲင်ꩻကားကအဝ်ႏ
ဟန်ႏနီꩻ – ၂၀ စန်နဝါရီ ၂၀၂၂
ထမ်းစင်း လွူးတဲင်စတုဒီသာကို ပအိုဝ်ႏမွိုးဖြား မာꩻကိုကာယကုသိုလ်ႏကျာꩻ၊ ဟိုပုံꩻ၊ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ
ဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ လိုꩻကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ ခြွဉ်းဗူႏဝင်ꩻတွော့ꩻ နွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်ညီꩻဒါႏ ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏဒျာႏသွူ၊၊ ထူႏသုင်ꩻတွမ်ႏ ဝီခီကဟဲ့ꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါဝဲက်သုဲက်(Website)ယိုတဲင် နွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်သော့ꩻ အဆင်ႏဖေႏကလ့ꩻ ဖန်ဆင်ꩻမာꩻခါꩻဒျာႏသွူ။ ဝီခီလိတ်မဲ့ငါ ယံကဗွေစွုမ်ႏထဲင်း ယံကဟဝ်ထဲင်းတာႏ ကေားသုင်ꩻသားဖုံႏ အခိန်ႏနားရီႏအလွောက်ꩻ အဝ်ႏနွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်ကိုဒျာႏဝင်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားကိုနဝ်ꩻ ကလွောက်ꩻနာႏကဲက်ညီႏဒါႏ ယူနီကိုဒ်(Unicode)(၅.၂)စံနိုန်း လိတ်ဖြုံႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း နွို့တဲမ်းဖျင်၊ နွို့ဟော်ꩻထွား စတဲင်ဖုံႏ မာꩻနွောင်ꩻဒျာႏဝင်ꩻသွူဩ။
ပအိုဝ်ႏမူႏဖုံႏ တွမ်ႏယိုꩻယာႏခွမ်ꩻလာꩻတွော့ꩻ စာဆေꩻကျာꩻပွုံႏ
ဝီခီပီးဒီးယားယိုနဝ်ꩻ တွမ်ႏယူနီကိုဒ်ဖောင့်မုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ဟော်ꩻထွား သွုံꩻတဲမ်းသော့ꩻ လꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
ချာႏပြန်ႏပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏသားအတာႏ ဖဲ့ꩻထွေအခဝ်ကီစဲင်ႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ "ခွုမ်မာꩻချက်ဖုံႏ" ဆꩻလ့ကိုအဝ်ႏဒါႏ "ဘာႏသာႏပြန်ႏဖုံႏ"ယို ထူႏသွုံꩻထွူတဲင် ထူႏပါ Translation Tool အကူႏညီႏတဲင် ပြန်ႏနွောင်ꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏသွူ။
သတ်ပုံကျမ်ꩻကိုနဝ်ꩻ စဲစ်ဆေꩻနွောင်ꩻဒျာႏ လိတ်ဖြုံႏဖုံႏ၊ ယီးနယ်သတ်ပုံနယ်ꩻဖုံႏ လꩻလို့ဒျာႏသွူ။
နွို့ထွားနမူႏနာႏတာႏ တွမ်ႏ ဖေႏကသေနာႏယိုꩻတာႏ ထွားရီးသွော့ ဟော်ꩻထွားရီးတာႏနိဒါန်းနဝ်ꩻသြ။
ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားနဝ်ꩻ မဏ္ဍိုင် (နိယာမ)အဝ်ႏ ငတ်ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
မိဉ်ႏအဝ်ႏလိုႏ အကူႏညီႏဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုကိုသြ။
မိဉ်ႏမဲဉ်စံꩻထွားစိမ်ꩻနဝ်ꩻ သွုံꩻလိတ်မဲ့ငါယိုတဲင် စံꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ခြပ်ချော်ꩻ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။
မိဉ်ႏမဲဉ်လွူꩻထွားစဲင်းစဲ့ ခြပ်ချော်ꩻမုꩻအကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားသွော့ လိတ်မဲ့ငါယိုသြ။
ဖေႏကျံႏညဏ်ႏ၊ အုံကွံဒေါ့ꩻရီထဲင်း အလင်ဖုံႏတာႏ နွို့ထွားဒေါ့ꩻရီလွေꩻနွောင်ꩻဒျာႏ ပအိုဝ်ႏဝီခီပီးဒီးယားဖေ့ဗုတ်ကိုသွူသြ။
လွိုင်ႏအာတာႏ • ခမ်းထီရေꩻ • ပညာႏတာႏ • ဟံႏပထဝီႏ • ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ • ယေန်ႏငဲးတာႏ • လိုꩻခွိုꩻဖုံႏ‎ • သမဲင်ꩻ‎ • နမ်းခြောင်ꩻခရာႏ • အိုပ်ချုတ်ရေꩻ
ခမ်းသားခြွိုင်ႏသန်ꩻတာႏ • တသီႏပညာႏ • တသီႏဖုံႏ • ရောႏဂါႏ
ခရိယာန်ႏ • စေင်း • စျူး • သိစ် • ဗုဒ္ဓ • ဟေင်ဒူ • အိစ်သာလမ်
ကဗျာ‎‎ • ဂီတ • ကေင်းဖုံႏ • လိတ်လုဲင်ꩻ • မွန်းပျောႏတာႏ • ရုက်မွန် • ပကီႏကဝ်ႏလုဲင်ꩻ • ပျꩻတွိုက်ဖုံႏ • ပွယ်ꩻတန် • ဗိသုကာႏပညာႏ • ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ • အနုပညာႏ • ထာꩻခွုမ်ဆိုး
ကွန်ပျူတာ • သွုပ်ဆွိုက်တာႏ • သော့ဝွဲး • စွဲးထူႏပသာတာႏ • အီလက်ထရွန်းနိစ် • အိဉ်စိဉ်နီယာ
ဂျိုလ်ႏ • ကမ္ဘာႏဟံႏ • တွိုက် • အမေႏရိကတွိုက်နဝ် • အမေႏရိကတွိုက်ထင်ꩻ • အာဖရိကတွိုက် • အာသျတွိုက် • အာတန်တိကတွိုက် • ဥရောပတွိုက် • သြသတေးလျ • အိုဆျန်းနီးယား • ကောင်ဖုံႏ • ခမ်းထီ • ပင်ႏလယ်ႏ • သမုဒ္ဒရာႏ • ခြောင် • ဝေင်ꩻဖုံႏ • ထီနမ်း • နောင်
မနုဿဗေႏဒ • ပညာႏတာႏ • ကျောင်ꩻ • ကေားလေက် • တက္ကသိုလ်ႏ • လိုꩻဖဝ • လမ်းသားခြွဉ်း • သဘာဝတ္ထဗေဒ • ဒဿနပညာႏ • ဘာႏသာႏဗေႏဒ • ဥပဒေႏပညာႏ • လိုꩻခွိုꩻ • တောႏလမ်းတောႏပါႏ • ခမ်းထီရေꩻ • လွိုင်ႏအာတာႏ
သုတေသနစခါပညာႏ • လုံးစိုး • ထီဝစိုး • တောင်ꩻစိုး • ပသီႏစိုး • အီဂျစ်ပွိုင်းလဲင်ႏစခါ • ထာꩻခေ့ꩻစိုး • စိုးထာႏဝ • ရီနေသွန်းစိုး • ဗိတိသျအဉ်ပါယာ • ပထမကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ • ဒုတိယကမ္ဘာႏစဲ့ꩻ • စဲ့ꩻယေန်ခွꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻ • ကမ္ဘာႏသမဲင်ꩻ • ပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻ
ဝီခီဖီးဒီယာယိုနဝ်ꩻ ဝီခီဖီးဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ပရဟိတအစွိုꩻအဗူႏ တထူႏတဝ်းအကျိုꩻအမျတ်တဲင် ဗွောင်လွေꩻဖေႏဒျာႏသွူ၊ ဝီခီဖီးဒီယာ ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏဗွောင်လွေꩻဖေႏ နုဲင်းလ့ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။
ဝီခီဖီးဒီးယားယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းလွေꩻဖေႏဒျာႏတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏသွူဩ။ ဗွောင်စလွေꩻ တယ်ႏခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၂၁ ဗာႏ ဗꩻတွိုႏလွဉ်ယိုခါ အကျောင်ꩻခရာႏလိတ်မူဖုံႏ အဝ်ႏလဲဉ်း ၉၃၉ ဗာႏသွူဩ။
တွမ်ႏဘာႏသာႏလင်ဖုံႏ ကတဲမ်းခါꩻဒါႏ ဝီခီဖီးဒီးယားဖုံႏလဲ့ နွို့ထွားနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ လိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻ အအာသွတ်ꩻ ဝီခီဖီးဒီးယားလိတ်မဲ့ငါဖုံႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ခါꩻ လနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူဩ-
လိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ၁,၀၀၀,၀၀၀ လွို:
English • العربية • Deutsch • Español • Français • Italiano • Nederlands • 日本語 • Polski •
Português • Русский • Svenska • Українська • Tiếng Việt • 中文
လိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ၂၅၀,၀၀၀ လွို:
Bahasa Indonesia • Bahasa Melayu • Bân-lâm-gú • Български • Català • Čeština • Dansk • Esperanto • Euskara • فارسی • עברית • 한국어 • Magyar • Norsk • Română • Srpski / српски • Srpskohrvatski / српскохрватски • Suomi • Türkçe
လိတ်မူရောမ်ဖြုဲင်ꩻ ၅၀,၀၀၀ လွို:
Asturianu • Bosanski • Eesti • Ελληνικά • English (simple) • Galego • Hrvatski • Latviešu • Lietuvių • മലയാളം • Norsk nynorsk • Slovenčina • Slovenščina • ไทย
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/အဓိကလိတ်မဲ့ငါ&oldid=5286342"
This page was last edited on 19 December 2021, at 11:18.